Rina Randriamasinoro “Tsy mitsoaka isika fa vitantsika io”
Marc Ravalomanana “Akatony ny MBS raha sahy ianareo”
Ny 30 jolay teo no nandefasan’ny Ben’ny tanànan’Antananarivo Naina Andriantsitohaina taratasy manambara ny fanafoanana ny fifanarana fampiasana tany an-taonany maro na “bail amphytéotique”
RMDM Hiantso hetsika lehibe aorian’ny fihibohana
Ny RMDM sy ny mpanohitra rehetra, dia manameloka ny tsy fisian’ny demokrasia sy ny tsy fanajana ny zon’olombelona sy ny tany tsy tan-dalàna nodradradrain’ny mpitondra ankehitriny nakana fahefana.
Emilien Ramboasalama “Fiaikena tsy fahombiazana ny kabarin’ny filoha”
Kabary fiaikena tsy fahombiazana tao anatin’izay 4 bolana mahery nitantanana ny ahamehana ara-pahasalamana izay no fahitako ireny kabarin’ny filoham-pirenena ireny, hoy ny solombavambahoakan’ny boriborintany faha 4, Emilien Ramboasalama.
Rivo Rakotovao “Hanaparam-pahefana fotsiny ilay fahamehana”
Fanaparam-pahefana ny mbola fanohizana ny hamehana ara-pahasalamana izay efa andiany faha-11 izao, raha ny nambaran-dRakotovao Rivo, izay sady Filohana andrim-panjakana no mpandrindra ny antoko HVM.
Julien Andriamorasata “Tsy hijanona eo ny krizy ara-tsosialy”
Tsara ny mandray andraikitra sy manao zavatra, hoy ny manampahaizana manokana momba ny fitantanana raharaham-panjakana, Julien Andriamorasata, naneho ny heviny mikasika ny fepetra vaovao noraisina momba ny hahamehana ara-pahasalamana amin’ity tapabolana manaraka ity.
Riribe Miantso ny mpanohitra hanitsy ny mpitondra
Mandalo fotoan-tsarotra ara-politika, toekarena, sosialy ankehitriny ny firenentsika, hoy ny filoha nasionalin’ny federasionin’ny gadra politika, Henry Rakotomalala na Riribe, noho izao valanaretina Coronavirus izao.
Aoka izay ny fifanenjehana Miantso firaisankinam-pirenena ny HMF
Nanao antso ho fiombonam-po amin’ny famongorana ny valanaretina mamely ny firenena ny hetsiky ny mpitondra fivavahana (HMF) tarihin’ny Pastera
Tonga omaly avy tany Eoropa sy Etazonia ny Kandida ben’ny tanànan’Antananarivo Rina Randriamasinoro atolotry ny antoko TIM,
izay nankasitraka sy ny nisaotra an’I Marc Ravalomanana satria tena manana raiamandreny isika, hoy izy. Nijery ny an’ny olona sy ny azo atao. Nanampy traikefa ihany koa. Naneho avy hatrany ny fahavononana ny hiara-kiasa amin’Antananarivo ireo notsidihina. Lazaina fa nitsoaka sy niala an-daharana aho. Isika tsy mitsoaka an-daharana izany. Rehefa natao io dia hatao hatramin’ny farany ary tsy maintsy vitantsika io. Tsy sangisangy io ka tsy hitamatama isika. Tonga miaraka ny fanombohana ary miasa miaraka no fahombiazana. Efa vonona ny programan’asa rehetra ary hoentina any amin’ny “pré-campagne”, izay nanentanany ny mpiara-dia rehetra. Na tanora na mpianatra na fikambanana na olom-pirenena,… raisina an-tanan-droa satria rehefa miray hina mahavita zavatra foana, hoy ity kandida ity.
Mihavàna, aza miady,…
Nalefa tany Parisy sy Washinghton ny kandida Rina Randriamasinoro, ary matoa nalefa tany dia i Dada tsy manao kitoatoa izany, hoy kosa I Marc Ravalomanana. Tsy maintsy hatao fantany izany manompo vahoaka sy asan’ny ben’ny tanàna izany, hoy i Marc Ravalomanana omaly teny Ampandrana. Tanjontsika ny hampandaniana azy ary tsy maintsy lany izy, sitrapon’Andriamanitra ny hahalany azy mba hanasoavana ity firenentsika ity. Fanaratsiana daholo ny mandeha any ambadika satria anjaran’ny CUA ny mitaona ny fako, tsy anjarany ny manisy rano eny amin’ny paompy. Efa mahalala ny any ivelany izy izao, efa mahay ny tao amin’ny kaominina ary mahavita izy. Tsy mitsoa-pahana isika ary tsy miraviravy tanana, fantatro ny zavatra tokony ho vitany sy ny hanamboarantsika an’ity tanàna ity. Izany no mahatonga ireo ben’ny tanàna sy solombavambahoaka hiasa miaraka. Tena hiasa sy hanao izay hampandaniana azy isika, ary tsy izy ihany fa eo ihany koa ireo mpanolotsaina. Nambarany fa efa nihaona taminy ireo tao anatin’ny TIM mety nisintaka kely ary efa miasa mangina any ambadika any. Tandremo tsara ny mifandatsa hoe hay niverina ihany, ary mihavana tsara, hoy izy. Anisan’ny noraisin’i Marc Ravalomanana ohatra sy nataony vazivazy ny ao amin’ny Boriborintany faha-4. Mbola hisy fotoana lehibe hiantsoana azy ireo,… Zanak’i Dada daholo ireo, ka aoka mba tsy hifanao am-po sy hifandatsa, hoy izy.